21 zvidobi zvePadad ne iPhone zvaungangodaro waisaziva | IPhone nhau
21 iPad uye iPhone Tricks Iwe Pamwe Waisaziva Nezve
IPad nhau | | iPad, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Makore mazhinji apfuura ndakatenga yangu yekutanga iPhone, ndisati ndashandisa iyo BlackBerry chikuva, ipapo ndakatenga yangu yekutanga iPad Mini, iyo yava kushandiswa nemwanakomana wangu; Zvakanditorera makore kudzidza nekuwana zvidobi zvakasiyana zvaunogona kuita nemidziyo yako yeIOS, hunyengeri hwePadad uye iPhone izvo zvinoita mutsauko nemamwe mapuratifomu. Muchikamu chino tichakuratidza humwe hunyengeri, hwawaisaziva.
1 Zvidobi mumashandisirwo akasiyana
1.1 Dhonza yekuwedzera foni otomatiki pa iPhone
1.2 Shandisa Google Mepu seGPS yemahara (Offline)
1.3 Misa mutambi wemimhanzi uine iyo timer
2 Shandisa Matipi
2.1 Simba rechiratidzo rinoratidzwa nenhamba
2.2 Vhara iyo multitasking bar
2.3 Tora mafoto uye nyora mavhidhiyo nerubatsiro rwemahedhifoni
2.4 Vhura zvekare tabo dzakavharwa munguva pfupi yapfuura muSafari
2.5 Kutsvaga Kwekutarisa
2.6 Bvisa iro rekupedzisira digit rakapinda mu Calculator
2.7 Calculator yesainzi
2.8 Rimwe basa remahedhifoni
2.9 Mupumburu kumusoro pamwe chete watinya
3 Zvirongwa Matipi
3.2 Ndege modhi yekuchaja kifaa chako kaviri nekukurumidza
3.3 Bhatani rubatsiro
4 Keyboard tricks
4.2 Permanent mavara makuru
4.3 Chinja keyboard kuita maviri screen mode (chigunwe)
4.4 Maitiro ekunyora iyo degree icon º
4.5 Zunza kuti ubvise zvakanyorwa
5 Camera manomano
5.1 AE / AF kukiya
Zvidobi mumashandisirwo akasiyana
Dhonza yekuwedzera foni otomatiki pa iPhone
Iyo kumbomira kudhiza ficha yeiyo iPhone inokutendera iwe zivisa chishandiso chako kuti umbomira mushure mekufona imwe nhamba wobva waridza imwe nhamba. Saka, ngatiti iwe urikufonera shamwari pakambani "X", nhamba yefoni yekambani iyi 123456 uye shamwari yako yekuwedzera ndeye 789. Nesarudzo iyi, iyo iPhone ichatanga kufona 123456 kutanga, imbomira kusvikira foni yapindurwa, uyezve iyo zvinongodaidza 789. Kuti ushandise chimiro ichi, zvakapusa dzvanya uye ubatisise asterisk "*" bhatani mushure mekunge iwe waisa nhamba yekutanga, saka komma inozoratidzwa. Zvino wedzera iyo yechipiri nhamba kuti dial mushure mekumbomira.
Shandisa Google Mepu seGPS yemahara (Offline)
Paunenge uchienda kunze kwenyika, unogona kushandisa Google Mepu seGPS yemahara, pasina chikonzero chehurongwa hwepasi rose hwe data. Usati waenda kunze kwenyika, ratidza nzvimbo yausingazove neinternet, wobva waswededza kumepu yenzvimbo iwe yaunoda kushandisa mukushandisa kwemepu, uye nyora "ok mamapu" mubhokisi rekutsvaga. Iyi data ichave ichiwanikwa kunyangwe iwe usina dhata yekubatanidza.
Misa mutambi wemimhanzi uine iyo timer
Unogona mira kutamba kwemimhanzi mushure menguva yakati rebei. Izvi zvinonyanya kubatsira kana iwe uchida kurara uchiteerera mimhanzi, asi usade kumuka kuti umise kutamba. Iwe unofanirwa kuenda kunguva, wobva wasarudza Timer uye gadzirisa iyo nguva. Sarudza sarudzo "Mira kutamba”Zvekuti kana iyo timer yapera, kutamba kunozomira.
Simba rechiratidzo rinoratidzwa nenhamba
Mako * 3001 # 12345 # * wobva wadzvanya bhatani rekufona.
Mushure mekubaya bhatani rekufona, iwe uchaona iyo Munda Bvunzo yechishandiso. Iwe zvino unenge uine nhamba yakaipa kuratidza ma decibel (dBm) pachinzvimbo chebhawa rechiratidzo.
Vhara iyo multitasking bar
Kana uchivhara maficha mu multitasking bar (mushure mekubaya-bhatani bhatani reKumba) unogona kuvhara kusvika kumatatu ekunyorera panguva imwe chete. Unongofanira kushandisa minwe mitatu kuvhara mafomu.
Tora mafoto uye nyora mavhidhiyo nerubatsiro rwemahedhifoni
Dzvanya bhatani revhorumu + pane iri kure kudzora mahedhifoni ako inoenderana neApple mukati mekamera application kupfura iyo foto kana kurekodha vhidhiyo, yakanakisa zano yekuti iwe utore yakanakisa selfies.
Vhura zvekare tabo dzakavharwa munguva pfupi yapfuura muSafari
Pane yako kifaa, riini bata + bhatani kuti uvhure matabo matsva kubva kuSafari, iwe unowana runyorwa rwenguva pfupi yapfuura tabo.
Kana uchitaipa mukutsvaga kweSpotlight, unogona vhura uye uwane chero chero ruzivo iyo inochengetwa mufoni, shamwari dzako (dzinogona kutsvaga nezita kana nhamba), maapplication, mameseji, zviitiko zvekarenda, nziyo, mavhidhiyo nezvimwe zvakawanda (kana munhu awana zvauri kutsvaga, chishandiso chicha tsvaga Indaneti). Inogona kuve yakagadzirirwa kune zvaunoda, enda ku Zvirongwa> Zvakajairika> Kutsvaga Kwekutarisa. Unogona kushandisa chaiko Kutsvaga paunenge uchida kufona, kutumira meseji (pane kuenda kune yekunyoresa rondedzero), tsvaga kunyorera kusingawanikwe pakati pemazana ekunyorera, kana kutsvaga rwiyo (unogona kutsvaga nemusoro wenyaya, muimbi kana album), pachinzvimbo chekupururudza kuburikidza nemitambo yese yekutamba.
Bvisa iro rekupedzisira digit rakapinda mu Calculator
Kana iwe uchida kudzima iyo yekupedzisira digit iwe yawakanyora mu Calculator, zvakapusa ondomira munwe wako pane Calculator chidzitiro kubva kuruboshwe kurudyi kana zvakasiyana.
Shandura chimbo chako ne-on-screen calculator uye chichava Calculator yesainzi.
Rimwe basa remahedhifoni
Neiri kure kudzora mahedhifoni ako, unogona kudzora mutambi uchiteerera kumimhanzi. Dhinda bhatani reKutamba / Kumbomira pamahedhifoni ako kamwe kuti umbomira kana kutamba, kaviri kuti uende kurwiyo rwunotevera, kana katatu kuti udzokere kuimba rwiyo rumwe.
Mupumburu kumusoro pamwe chete watinya
Paunenge uchitarisa kure pasi peji, Dzvanya pabhodhi yepamusoro yechero application uye izvi zvinokudzosera kumusoro ipapo ipapo.
Kana mwana achida kutamba ne iPhone yako kana iPad, ungangoda kumisikidza Inotungamirwa Yekuficha ficha. Iyi ficha inochengeta iyo minwe midiki inogumira kune tinya chete munzvimbo dzakatarwa uye usingabude muapp.
Enda ku Zvirongwa> Zvakajairika> Kuwanika> Kutungamirirwa Kuwana uye woigonesa, nenzira iyi unogona kutanga kuimisa.
Ndege modhi yekuchaja kifaa chako kaviri nekukurumidza
Kana iwe ukaisa foni mukati ndege muoti, izvi zvichachaja zvakapetwa nekukurumidza. Edza iyo kana iwe uri mupfupi pakubhadharisa nguva, iri chaizvo nguva yekusevha.
Kana iwe uine bhatani repamba rakaputsika kana uri kunetseka kubata iyo skrini, gonesa iyi sarudzo. Paunenge iwe uchimisikidza kubva ku kuwanikwa kwezvirongwa, iwe uchaona hombe chena chena pachiratidziro kubva kwaunogona kushandisa akasiyana mabasa echishandiso chako.
ari mapfupi ekhibhodi anokutendera kuti ushandise mapfupi kumashoko akaomarara aunonyora zvakanyanya. Unofanira kuenda ku Zvirongwa> Zvakajairika> Keyboard> Shanduro yemavara. Izvo zvakanaka kune anotevera marudzi epfupi:
Akaoma kana akareba mazwi.
Zviratidzo zvisina kujairika senge: ← →, ♥, nezvimwe.
Migwagwa nenzvimbo zvaunowanzo taura mumameseji kana maemail.
Mashoko anowanzove akapereterwa zvisizvo.
Permanent mavara makuru
Dzimwe nguva zvakafanira kunyora mutsara kana chidimbu chete nemavara makuru. Unofanira ita chimbichimbi pombi mbiri kuti ushandure makiyi ekuvhara zvachose.
Chinja keyboard kuita maviri screen mode (chigunwe)
PaIpad, iwe unogona kunyora zvakanyatsogadzikana ne chinja keyboard yako kuita mbiri screen screen (chigunwe). Zvaunoda zviri nyore tsvedza zvigunwe zviviri pabhodhi uye iyo keyboard ichaparadzaniswa nepakati.
Maitiro ekunyora iyo degree icon º
Kana iwo musoro wenyaya kana kemesitiri inoenderana, ungangoda kushandisa degree diki º. Dhinda uye ubatisise iyo nhamba zero kwemasekondi akati wandei, uye icon yegiredhi icharatidza pamusoro, wobva wasarudza iyo yaunoda.
Zunza kuti ubvise zvakanyorwa
Paunenge uchitaipa meseji pane iyo keyboard, pane imwe nguva iwe ungangoda bvisa mazwi ese, izvi unofanira zunza chishandiso uye dzvanya RegedzaIzvi zvinodzima meseji yacho kamwechete.
AE / AF kukiya
AE / AF kukiya ndiyo tarisa uye yekuvharira kukiya nekhamera iPad kana iPhone, zvinobatsira kana iwe uchida kutora pikicha nemwenje kana kudzika mumamiriro akaoma. Iyo "AE / AF Lock" inoonekwa, apo iyo skrini inobatwa pasi kwemasekondi mashoma. Kuti urege kuita basa iri, tinya pachiratidziri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » 21 iPad uye iPhone Tricks Iwe Pamwe Waisaziva Nezve
Kuziva sei kuwanda kwematweaks atakaisa
Iye zvino tava kukwanisa kurodha nziyo dzinopfuura makumi maviri neshanu kuTunes Match uye iCloud Library